HUIZI ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ - ခန့်အပ်ရန်ထောက်ခံချက်များ - သတင်း - Shanghai HUIZI digital
Semi-cured Gel strips တွေ
Tattoo / Eye shadow စတစ်ကာများ
Huizi ၀ န်ဆောင်မှုများ - ခန့်အပ်မှုထောက်ခံချက်
အချိန် - 2021-05-27 hits: 11332
ကျွန်တော်တို့၏ "လက်ဖက်ပင်ပင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ" ခြေသည်းတွင်ရနံ့ကုထုံးဆီခြေစိမ်ခြင်း၊ နက်ရှိုင်းသောသန့်ရှင်းရေး၊ လက်သည်းညှပ်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းဖြင့်အသားအရေသည်စင်ကြယ်သည်၊ ခြောက်သွေ့သည်မဟုတ်၊ လက်ဖက်စိုက်စက်ရုံမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ကတ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ "မာဂရက်နှင်းဆီ" လက်ရန်းတွင်ရှားစောင်းလက်ပတ်လက် masque၊ လက်သည်းပုံသဏ္,ာန်၊ cuticle ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု၊ လက်နှိပ်မှုနှင့်အရောင်အသွေးတို့ပါဝင်သည်။
မိတ်ကပ်လျှောက်လွှာကိုမိနစ် ၃၀ အတွင်းသင့်ရှိပြီးသားမိတ်ကပ်အပေါ်တည်ဆောက်သည်။ သို့မဟုတ်ခြေလှမ်းတစ်ဆင့်ချင်းလမ်းညွှန်မှုနှင့်အတူအင်္ဂါရပ်တစ်ခုကိုအာရုံစိုက်ပါ။ သဘာဝအလျောက်မျက်လုံးများနှင့်နှုတ်ခမ်းများ၊ ပြည့်စုံသောအသားအရေသို့မဟုတ်ထုထည်ရှိသောမျက်နှာများပါ ၀ င်သည်။
နှုတ်ခမ်းမှမျက်တောင်အထိသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုရွေးချယ်ပါ။ မိတ်ကပ်နှင့်အရေပြားသန့်ရှင်းရေး၊ ဂရုစိုက်မှုပါ ၀ င်သည်။ အကြံပြုထားသောစိတ်ကူးယဉ်မှု၊.
As world’s leading manicure service, ဟူဇီ cosmetics offers the best manicurists and beauty experts straight to your home, office, hotel or event, guaranteeingaspecialist and ‘best in class’ service.
To makeabooking, please email to [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] and ask for price and availability.
COVID-19, y စဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နံပါတ်တစ် ဦး စားပေးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဗေဒပညာရှင်များကိုသင်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ရန်နှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံသည်သန့်ရှင်းပြီးလုံခြုံမှုရှိစေရန်တင်းကြပ်သောဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလိုက်နာရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီးဖြစ်သည်။ နောက်လာမည့် ၀ န်ဆောင်မှုတွင်မည်သည့်အရာကိုမျှော်လင့်ထားမည်နည်း။
အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်အလုပ်မ ၀ င်မှီနေ့တိုင်းမိမိကိုယ်ကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အပူချိန်စစ်ဆေးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အသုံးပြုမှုတိုင်းမတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်ကုန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးသူများအား sanitize လုပ်ပြီး avoi သို့တစ်ကြိမ်တည်းအသုံးပြုသောတစ်ခါသုံးအသုံးချစက်ကိုအသုံးပြုသည်d Cross- ညစ်ညမ်းမှု။
* ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။ ဤအဖြစ်အပျက်၏နောက်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အားဖြင့်ရယူထားပါသည် Shanghai HUIZI အလှကုန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ရှေ့သို့ တော်လှန်ရေး Nail Wraps တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်
နောက်တစ်ခု: ၂၀၂၁ လက်သည်းအနုပညာထိပ်တန်း ၁၀ ။
မူပိုင်ခွင့်© 2018-2019 HUIZI ဒီဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးများကိုသီးသန့်ထားရှိပါသည်။